Ukufumana iVisio ... aka ... Abantu bayazibuza ukuba kutheni ndikwiMac | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 28, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu bayazibuza ukuba kutheni ndingasebenzisi iMicrosoft kangangendlela ebendinayo ngaphambili. Abanye abantu bacinga ukuba yonke le PC / Mac yinto nje yokuqhula. Ndacinga ukuba I-PC xa ithelekiswa neMac Into yayiyintlekisa nje, nayo. Ngu hayi. NdikwiMac ngoku ngokusesikweni konyaka omnye.
Eyona nto imbi ngokusebenza kwi-Mac kufuneka isebenze kwi-PC nayo. Ndenza njalo yonke imihla emsebenzini. Kutshanje ndilayishe iVista (isebluescreen emva kobusika) kwaye kufuneka ndikhuphele kwaye ndifake iMicrosoft Visio Standard Edition. Kulula, kunene? Ndiyithengile kwiMicrosoft kwi-Intanethi ke ndiza kuyikhuphela kwakhona, kwaye ndiyibuyisele kwakhona.
Ndiya kwindawo enengqiqo, iZiko lokukhuphela iMicrosoft. Kukho i-beta yesilverlight yeZiko lokuKhuphela likaMicrosoft ke ndiyaya! Ndichwetheza nje "iVisio" kwindawo "yokukhangela ukhuphelo". Nantsi into eza kuqala ngeziphumo ezili-119:
Sisiphi isiphumo sokuqala esikwindawo yokuqala? Ayisiyiyo iVisio konke konke… yiyo 2007 Microsoft Office Yongeza-ngaphakathi: Microsoft Gcina njengePDF okanye iXPS. Huh? (Andizukuzama ukufumana ukuba kutheni isiphumo sokuqala sasikwinqanaba # 31). Ke, ndafunda ndaza ndahlela ndaza ndafunda ndaza ndahlela ndaza ndandisa ukubonisa iziphumo eziyi-100… andifumani Visio naphi na… abanye ababukeli kunye neqela lezinye izinto.
Siya kwisiza seOfisi! Ukusukela oko ndathenga iVisio kwi-Intanethi, ndiye ndacinga ukuba ndiza kubuyela evenkileni ngeMicrosoft. Ndiyaphuthaphutha kancinci, kodwa ndiyifumana… IVisio Standard Edition. Kwaye kwicala lasekhohlo… Ukuthenga kwangaphambili! Yahoo !!!!… er… Ndithetha ukuthi Wahooo !!! Ndicofa ukuthengwa kwangaphambili kunye nenombolo yam invoyisi iyavela. Ewe !!!! Sele uza kufika!!!! Ndicofa ukuthenga kwaye nantsi into endiyifumanayo:
Yhu. Ndisebenzisa i-Intanethi Explorer 7 nokuba… andikubeki le ngozi kwiFirefox. Ndicoca iikuki zam. Ndizulazula emva, cofa kwi-invoyisi yam… kunye….
Ufunxa iMicrosoft! Vala kwaye ucime iwebhu… uyanya! Ngoku andinakuyenza iprojekthi yam namhlanje ngesoftware ndiyaphoxeka kuba undenze ukuba ndiphucule endibizele enye i-150 yeedola endingenako ukuyikhuphela kwaye ndingakwazi ukuyisebenzisa.
Abantu bayazibuza ukuba kutheni ndikwiMac.
Akumangalisi ukuba kutheni iMicrosoft Brand isihla. Ndingothuka xa ndifunda nokuba abasebenzi beMicrosoft kufuneka basebenzise iimveliso zabo, kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi.
Mar 28, 2008 ngo 4:05 PM
Ewe, ndiyagula nayi-M$ crap. Kutshanje nditsibe inqanawa kuOutlook 07 ndaya eMozillas Thunderbird. Kwakhona uya kufaka iofisi evulekileyo kungekudala ukuze ulahle yonke inkunkuma ye-M$ yeofisi.
Ukujonga ngokwenyani ukwenza umtsi kwaye ungasebenzisi nto ngaphandle kwe-linux koomatshini bam ngoku. Sele ithandwa kakhulu ngumsebenzisi njengasemva kwexesha kwaye uninzi lwesoftware ye-winblows inenye i-linux ehambelanayo kwezi ntsuku.
Andiqinisekanga ukuba ndinesibindi ngokwaneleyo sokufumana i-mac tho.
Mar 28, 2008 ngo 5:36 PM
Elinjani lona iphupha elibi!!! Microsh*te! Xa sifunda abantu…. UMicrosoft uza kuba sengxakini yokweNENE xa uluntu lwamashishini luqonda ukuba luya konga ixesha kunye nemali xa lutshintshela kwiMac kwaye luyeke ukusebenzisa iimveliso zeMicrosoft.
Mar 28, 2008 ngo 7:57 PM
Kwaye okwangoku, njengoko ndifunda phantsi inqaku, ikhonkco lakho leeNtengiso zikaGoogle emazantsi ongeniso lwakho linamakhonkco okuthenga iOfisi ka-2003 kunye no-2007.
Kwaye iintengiso zeMac ecaleni, ezixutywe nezinye iOfisi yongeza ins.
Ngamanye amaxesha kuyonwabisa ngokwenene indlela ikhowudi yentengiso ezenzekelayo inokuvela ngayo ngamaxesha anomdla. Isithuba sakho esidityaniswe neentengiso "ezingexesha" zenza ubusuku bam 🙂
Mar 28, 2008 ngo 8:32 PM
Hayi! Oko kuhlala kubonakala kunjalo, Bob! Ngalo lonke ixesha ndiqhumisa umntu, iintengiso zabo ziphelela kwindawo. Kuyahlekisa kakhulu.
Mar 29, 2008 ngo-1: 08 AM
Vula iOfisi ilapha 2.4 kwaye 3.0 iya kuba nenyathelo elinye elingcono. Kukho izandiso ukuze umntu asebenzise iLaTeX kuyo kule mihla...
Mar 29, 2008 ngo 12:23 PM
Sebenzisa nje i-OmniGraffle Pro. I-Visio i-bloat-tastic kunjalo.
Epreli 1, 2008 ngo-1: 38 PM
Ndiye ndanethamsanqa ne-OmniGraffle Pro ngokunjalo, uJason. Ndinqwenela ukuba ifayile-ihambelana ngokupheleleyo neVisio (okanye i-vice-versa), nangona kunjalo! Ndinabathengi abasebenzisa iVisio.
Mar 29, 2008 ngo 2:36 PM
Uyazi ukuba iMac ibingazukuba mbi kakhulu ukuba ibingekho bonke abantu beMac. 😉
Epreli 1, 2008 ngo-1: 39 PM
Hayi! Unyanisile ngokupheleleyo, Mike. Siliqela eli-cranky- ngakumbi abantu abafana nam ababenzulu kubuchwephesha be-MS kumashumi amabini eminyaka adlulileyo!
Epreli 1, 2008 ngo-12: 53 PM
Ndibeneengxaki ezimbalwa kakhulu ngeemveliso zikaMicrosoft. Owu, ndineengxaki ezininzi kwi-Intanethi, kodwa akukho nto ibalulekileyo. Ngenxa yokungathembeki ngokubanzi kwe-Intanethi, ndikhetha ukuba neekopi ezinzima zazo zonke iinkqubo endizithengayo, ngakumbi xa zibiza kakhulu. Isikolo esidala, ndiyazi.
Iyahlekisa, kodwa ndibe neengxaki ezininzi ngeeMacs kunye neLinux kuneWindows, kwaye iinkqubo zomthombo ovulekileyo azibonakali ngathi zisebenza nam. Ngokuqinisekileyo ayisiyokunqongophala kobuchule bobuchule (bendisebenzisa iikhompyuter ukusukela ngeentsuku zeDOS).
Kwakhona, kutheni abantu betshintsha amagama xa bebhala “uMicrosoft”? Ndiyathetha, ayikuko ukuba ukuyipela kuya kwandisa amandla angengcwele kaBill Gates okulawula umhlaba. Ikhangeleka nje isidenge.
Epreli 1, 2008 ngo-1: 48 PM
Esi sithuba yayisisigebenga esikhulu phezu kokuphoxeka kwam kwindawo yabo. Ndicinga ukuba unxibelelwano kukuba iMicrosoft iqhawukile kubasebenzisi bayo. Umba wam wawungekho malunga nesoftware (ngeli xesha;), yayimalunga nenkonzo yabathengi.
Okoko ndikhumbula, bekuhlala kunjalo. I-Microsoft ibingafikeleleki ngandlel’ ithile kwaye ichaze isalathiso… izinto ezinje ngokuba nesikhangeli esingasebenzisanga migangatho, ukwakha imifuziselo yokhuseleko esebenza kuphela ngosetyenziso olusekwe nguMicrosoft, kunye nokungahoyi eminye imigangatho – njengemigangatho yoxwebhu.
Ndinentlonipho enkulu koko bakuzuzileyo, kodwa ndiyakholelwa ukuba ubutshaba babo kuye nabani na ongomnye osesithubeni bufumana okona kulungileyo kubo. Ukujonga nje ividiyo kaSteve Ballmer indipelela!
Ungandivi kakubi, uJobs unemikhwa yakhe, naye. Ungujackass ukuba ufunda imagazini eneeNcingo zamva nje. Kodwa ndicinga ukuba ingqalelo yakhe igxile kakhulu ekutshintsheni imeko ekhoyo kunye nokuzama ukwenza izinto zibe lula kwaye zibe nesitayile ngakumbi 'kwihlelo' lakhe.
Epreli 14, 2008 ngo-4: 59 PM
Inqaku nje, iMicrosoft ilandele i-imeyile malunga nokukhuphela kwam namhlanje, 4/14/2008 enekhonkco lokukhuphela kunye nesitshixo semveliso ekufuneka usifake.